ကွမ်းညှပ်ကြီး | မိုးသကျဦးလှငျ
Home » ၀တ္ထုတို » ကွမ်းညှပ်ကြီး
“ ဟေ့ ဒီနေ့ သူကြီးနဲ့ ဖိုးသူတော် ကွမ်းညှပ်ကြီးဆီမှာ အဆုံးအဖြတ်ခံကြမတဲ့... ၊ ဘယ်သူကတော့ လက်ပြတ် ပြီး ရွာနှင်ခံရမလဲမသိဘူးဟေ့..”
ညှပ်ကြီးရွာသူရွာသားများ အကြား လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်နေသော စကားတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်.။
ရွာအမည်ကလည်း ဆန်းသည် “ညှပ်ကြီး” ရွာ. ။
သူတို့ရွာမှာ ရှေးဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်ကတည်းက သူကြီးမင်းအဆက်ဆက် ယုံကြည် အားထားလာခဲ့ သော ကွမ်းညှပ်ကြီးတစ်ခုရှိပါသည်.။ ကတိသစ္စာ၊ တည်သောခါဝယ်၊ သြဇာလေးနက်၊ ပေါ်ဆီတက်၍၊ နွယ်မြက် သစ်ပင် ဆေးဖက်ဝင်၏ ဆိုသည့် စကားတော့ မှန်မမှန်မသိ.။ ကွမ်းညှပ်ကြီးကတော့ ယခုထိ မှားယွင်းသည် ဟူ၍ မရှိဖူးသေး.။ ကွမ်းညှပ်ကြီးကား နှယ်နှယ်ရရမဟုတ်.။ မည်သည့်လောကီပညာရပ်များဖြင့် စီရင်ထားသည် မသိရပဲ.ကွမ်းညှပ်ကြီးထဲ လက်ထည့်ကာ သစ္စာဆိုပါက မှားယွင်းခဲ့လျှင် လက်ကို ညှပ်၍ အလိုအလျောက် ဖြတ်တောက်ပစ်သည် မဟုတ်ပါလား.။ ဥပမာ ရွာထဲတွင် လူနှစ်ဦး ငွေကိစ္စ အငြင်းပွား ခဲ့သည်ဆိုပါအံ့ .။ ထို လူနှစ်ဦး သစ္စာဆို၍ ကွမ်းညှပ်ကြီး အတွင်းလက်ထည့်ကာ တစ်လှည့်စီ အဆုံးအဖြတ်ခံရသည်. ။ အကြင်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်သည် မရိုးဖြောင့်ပဲ လိမ်ညာသည် ဖြစ်အံ့.။ ကွမ်းညှပ်ကြီးက ထိုသူ၏ လက်ကို ဖြတ်ပစ် လိုက်တော့သည်.။ သို့ဖြစ်လေရာ. ညှပ်ကြီးရွာတွင် သူခိုးသူဝှက် မရှိ၊ အငြင်းပွားသည်မရှိ ၊ မရိုးဖြောင့်သူ မရှိ ဟု ရွာနီးချုပ်စပ်များတွင်ပါ နာမည်ကြီးလေသည်.။
ထိုသို့သော ကွမ်းညှပ်ကြီးကို ရွာအလယ်ခေါင် သူကြီးမင်းအိမ်ရှေ့တွင် ရာဇမတ်ကွက်များကာရံကာ အစောင့် အကြပ် မပြတ်စေပဲ ထားလေသည်.။ ကွမ်းညှပ်ကြီးကား အရှည်တစ်တောင် နီးပါးခန့်ရှိပြီး ၊ ပုံမှန် သွေးလေ့ရှိသော ကြောင့် ထက်မြ၍ နေလေသည်.။ လွန်ခဲ့သော တစ်ပတ်ခန့်က ကွမ်းပွဲစား ဦးမြမောင်နှင့် သူရင်းငှား မောင်ဝင်းသူ တို့ အခြေအတင်ဖြစ်၍ အဆုံး အဖြတ်ခံကြရာ ကွမ်းပွဲစား ဦးမြမောင် လက်ပြတ်၍ ရွာ နှင်ဒဏ်ပေးခံရလေသည်.။
ယခုမူ အမှုအခင်း ဖြစ်လာချေပြီ.။ အမှုအခင်းဖြစ်သူက အခြားသူမဟုတ်.။ ရွာဦးကျောင်းဘေးမှ ဖိုးသူ တော်နှင့် သူကြီးမင်းကိုယ်တိုင်ပင် ဖြစ်ချေသည်.။ လွန်ခဲ့သော သုံးလခန့်က ဖိုးသူတော်မှ သူကြီးမင်းထံ ဖိုထိုးရန် အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ရွှေအစိတ်သား ချေးယူထားခဲ့ပြီး ပြန်မပေးသေးပဲ ငြင်းဆန်သည်ဟု သူကြီးမှ စွပ်စွဲသည်.။ ဖိုးသူတော်မှလည်း မိမိ ပေးပြီး ဖြစ်ကြောင်း သူကြီးမင်းမှ လိမ်လည်ကြောင်း ပြန်လည် စွပ်စွဲလေသည်.။ သို့ဖြစ်၍ ယနေ့ညနေတွင် သူကြီးမင်းနှင့် ဖိုးသူတော် ကွမ်းညှပ်ကြီးတွင် အဆုံး အဖြတ်ခံကြမည် ဖြစ်သည်.။
“ ဟဲ့… သာအေး နွားတွေမြန်မြန်သိမ်းစမ်း. ဒီနေ့ညနေ သူကြီးနဲ့ ဖိုးသူတော် ကွမ်းညှပ်ကြီးဆီမှာ အဆုံး အဖြတ်ခံကြမတဲ့..”
“ မိဘုတို့ စာဥတို့ ညည်းတို့တစ်တွေ ထမင်းစောစောစားထား ကြ.၊ ညနေကျရင် သူကြီးမင်းနဲ့ ဖိုးသူ တော် ကွမ်းညှပ်ကြီးမှာ သစ္စာပြုကြမှာတဲ့..”
ညနေစောင်းသော်..ညှပ်ကြီးရွာကား လှုပ်လှုပ်ရွရွ ဖြစ်နေချေပြီ.။ သူကြီးမင်းအိမ်ရှေ့ တရားစီရင်သော ကွမ်းညှပ်ကြီး တရားခွင်တွင်လည်း ပရိသတ်အပေါင်းက ရှုစားလျက်ရှိလေသည်.။ အချို့ကလည်း သူကြီးမင်းကတော့ လုပ်မှာမဟုတ်.၊ ဖိုးသူတော် ပြန်မပေးတာ ဖြစ်မည်ဟု ထင်ကြေး ပေးကြလေသည်.။
အချို့ကလည်း ဖိုးသူတော် ပြန်ပေးပြီးလျက် သူကြီးမင်း မေ့လျော့စွာ ပြန်တောင်းနေခြင်းဖြစ်သည် ဟု ယောင်ဝါးဝါးပြောကြလေသည်.။
“ အားလုံး ငြိမ်ငြိမ်နေ…”
သူကြီးမင်းကိုယ်တိုင် တရားလို ဖြစ်နေ၍ ခေတ္တသူကြီးမင်းဖြစ်နေသူ ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်မှ တစ်ချက်ဟန့် လိုက်ရာ ကျွတ်စီ ကျွတ်စီ ဖြစ်နေသော လူအုပ်ကြီးမှာ မီးကိုရေနှင့် ငြှိမ်းလိုက်သကဲ့သို့ ရှဲကနဲ ငြိမ်ကျသွားလေသည်.။
တရားလို သူကြီးမင်းနှင့် ဖိုးသူတော်တို့ ကွင်းပြင်ကြီးအတွင်းသို့ ၀င်လာကြပြီ.။
သူကြီးမင်းမျက်နှာက မကျေမချမ်းဖြစ်နေသည့်ပုံ.။ အနည်းငယ်ရှက်နေပုံလည်း ပေါ်သည်.။
ဖိုးသူတော်ကတော့ ခပ်တည်တည်၊ ခပ်အေးအေး ပုံ.တောင်ဝှေးကို တစ်ချက်ချင်းထောက်လျက် ..ဖြည်းဖြည်းပင်ထွက်လာသည်.။
ကွမ်းညှပ်ကြီးရှေ့ရောက်တော့ နှစ်ဦးစလုံး သစ္စာဆိုရန်ပြင်ကြသည်.။
“ ကျုပ်အရင် သစ္စာပြုမယ်.။ သူတော်ကြည့်ထားပေတော့..”
ရွာသားများအားလုံး အသံများတိတ်ဆိတ်သွားသည်.။ အပ်ကျသံပင်ကြားရမတတ် ဆိတ်ငြိမ်သွားပြီး အာရုံစူးစိုက်၍ သူကြီးမင်းသစ္စာပြုသည်ကို မျက်တောင်မခတ်ပဲကြည့်နေကြသည်.။
သူကြီးမင်းက ခပ်ပြတ်ပြတ်ပြောပြီး လက်မောင်းကို ပင့်သည်.။ ကွမ်းညှပ်ကြီးပေါ်ကို လက်ဖျံတင်လိုက် သည်.။
“ ကျွန်ုပ်သည်. လွန်ခဲ့သော သုံးလက ဖိုးသူတော်ထံ ရွှေအစိတ်သားချေးငှားခဲ့ပါသည်.။ ကျွန်ုပ်ပြန် တောင်းသော်လည်း ဖိုးသူတော်မှာ ပြန်မပေးရသေးပဲ ပေးပြီးကြောင်း ငြင်းဆိုပါသည်. ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ ထွက်ဆိုချက် မှားယွင်းပါက ကျွန်ုပ်၏ လက်ဖြတ်တောက် ခံရပါစေသား..”
သူကြီးမင်းက ခဏစောင့်ကြည့်ပြီး.။ ဖိုးသူတော်ဖက်လှည့်ပြီး.ခင်ဗျားအလှည့် ဆိုသည့်ပုံစံဖြစ်မေးငေါ့ပြ သည်.။ ရွာသူရွာသားများကလည်း လူလိမ်ဖိုးသူတော်တော့ လက်ပြတ်ရှာပြီဆိုသည့်အကြည့်ဖြင့် ကြည့်၍ သူကြီးမင်းကိုမူ ယုံကြည်ကိုးစားသော မျက်ဝန်းများဖြင့် တစ်ဖန်ကြည့်ရှုကြပြန်သည်.။
ဖိုးသူတော်ကခပ်အေးအေးပင် လက်သုံးတော် တောင်ဝှေးကို နံဘေးရှိ သူကြီးမင်းထံ ကမ်းပေးပြီး .. လက်ဖျံကို ကွမ်းညှပ်ကြီးပေါ်တင်လိုက်သည်.။
“ ကျွန်ုပ်သည်.. လွန်ခဲ့သောသုံးလခန့်က သူကြီးထံမှာ ချေးယူထားသော ရွှေအစိတ်သားကို သူကြီး လက်သို့ပြန်ပေးပြီး ဖြစ်သည်. ။ကျွန်ုပ်၏ စကား မှားယွင်းပါက. ကျွန်ုပ်၏လက် ဖြတ်တောက်ခြင်း ခံရပါစေ သား”
ကြည့်နေကြသော လူအုပ်ကြီးမှာ ဟာကနဲ ဟင်ကနဲ ဖြစ်သွားသည်.။ သူကြီးမင်းမှာလည်း မယုံကြည်နိုင်လောက်သော အကြည့်ဖြင့် ဖိုးသူတော်ကိုတစ်လှည့် ကွမ်းညှပ်ကြီးကို တစ်လှည့်ကြည့်သည်.။
ဖိုးသူတော်က အေးအေးဆေးဆေးပင် သူကြီးလက်မှ လက်သုံးတော် တောင်ဝှေးကို ပြန်ယူလိုက်ပြီး စကားတစ်ခွန်းမှ မပြောပဲ. တရားခွင်မှ ပြန်လည်ထွက်သွားတော့သည်.။ လူအုပ်ကြီးကတော့ အုန်းအုန်း ကျက်ကျက် ဖြစ်ပြီးကျန်ခဲ့လေသည်.။
ဖိုးသူတော် ကျောင်းသို့ပြန်ရောက်သောအခါ သက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီး လက်သုံးတော်တောင်ဝှေး အတွင်း ထည့်သွင်းထားသော ရွှေအစိတ်သားကို ထုတ်ယူသိမ်းဆည်းလိုက်လေသည်.။
ညှပ်ကြီးရွာမှ ခုံသမာဓိ ကွမ်းညှပ်ကြီးသည်လည်း လှည့်စားခံရသော နေ့မှစ၍ မည်သည့်အခါမှ တရားစီရင်နိုင်ခြင်း မရှိတော့ချေ..။
(ငယ်စဉ်က ဖခင်ပြောခဲ့ဖူးသော ပုံပြင်တစ်ခုကို အသွင်ပြောင်းဖန်တီးပါသည်.)
ရေးသားသူ : မိုးသက် // 4:30 PM
Posted by မိုးသက် at 4:30 PM Read more
နွေတေးရှင် (မင်းဧရာ) August 4, 2013 at 1:49 AM
ကွမ်းညှက်ကြီးပါ ခံလိုက်ရယ် ။
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) August 4, 2013 at 7:38 AM
ညှပ်ကြီးရွာသူကြီးမို့ ခံလိုက်ရတာပါ ကဧရာ
တုံးဖလားသူကြီးဆို ဒီလောက်တော့ အကင်းလေးပါ။း)